जान्नुहोस् ! यस्तो छ उत्तर सिरानी गरेर सुत्नु नहुने पौराणिक मान्यता
मार्च 27, 2019 मार्च 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments उत्तर सिरानी, पौराणिक मान्यता, सुत्नु
उत्तर सिरानी गरेर सुत्नु नहुने पौराणिक मान्यता ! घरमा तपाई कुन दिशातिर सिरान लगाएर सुत्नुहुन्छ ? मानिसको सुताई उसको स्वाथ्यसंग सम्वन्धित हुन्छ । एकदम ख्याल राख्नुहोस कुन दिशा सिरान लगाएर सुत्नु सही हुन्छ भनेर । हामी जव दिनभरी काम गरेर थाक्छौं । शरीरको उर्जा कम हुन्छ । शरीरमा उर्जा कम भएपछि आराम जरुरी हुन्छ । शरीरको आरामको लागि सुत्नु अत्यावश्यक छ । तर सुताइका पनि नियम छन् । त्यस्तै सुत्दा जहिले पनि भोजन गरेको २ घण्टाभन्दा पछि मात्र सुत्नुका साथै दिशा पिसाव गरेर सुत्नुपर्छ । सुत्ने समयमा जहिले पनि सकारात्मक सोंच राख्नुपर्छ । हात खुट्टा धोएर राम्रोसँग पुछेर मात्र सुत्नुपर्छ । शयन कक्षमा भगवानका चित्र हुनु राम्रो मानिन्छ । सूर्योदय भन्दा अघि नै उठिसक्नुपर्छ ।
नेपाली समाजमा गरिने विभिन्न संस्कारहरु आ-आफ्नो आस्था अनुसार धर्मसँग जोडिएका हुन्छन् । बिशेषत मृत् व्यक्तिहरुलाई उत्तर दिशातर्फ सिराने राखेर सुताइने गरिन्छ । उत्तर दिशामा टाउको राखेर सुत्दा भुत तथा मरेका मानिसहरुलाई आमन्त्रित गर्नु भन्ने जनविश्वास पाइन्छ । हामीले प्राय: सुन्दै आएको र सकेसम्म हामीले मान्दै आएको एउटा मान्यता के हो भने उत्तरतर्फ शिरानी गरेर सुत्नु हुँदैन । हाम्रो शास्त्रहरुले उत्तर शिरानी गरेर सुत्न वर्जित गरेको छ । आउनुहोस् यस बारेमा एउटा पौराणिक मान्यता तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
पौराणिक मान्यता अनुसार एक पटक जब भगवती पार्वती नुहाइ रहेकी थिइन् तब उनका पुत्र गणेश ढोकामा पालेको रुपमा उभिएका थिए । तब कोही भित्र जान पाएनन् । जब भगवान शिव आए तव गणेशले उनलाई पनि भित्र जानबाट रोके । जसका कारण भगवान शिव रिसाए । उनले आफ्नो पुत्र गणेशको शिर काटिदिए । जब पार्वतीले गणेशलाई पुन जिवित गर्न आग्रह गरिन् त्यस समय शिवले आफ्ना दूतलाई त्यस्ता मान्छेको सिर काटेर ल्याउन आदेश दिए जो उत्तर दिसामा शिर गरेर सुतिरहेको हुनेछ । त्यस सयमा मानवहरु सवै शास्त्रमा बर्णन गरिए अनुसार नै सुत्थे जसका कारण दूतले पृथ्वीमा कुनै यस्तो मानिस भेटेनन् जो उत्तरतिर सिरानी गरेर सुतोस् । यस्तोमा दूतहरुले उत्तर दिशामा सिर गरेर सुतेको एक हात्ती भेटे र त्यसकै शिर हिमालय पर्वत लगे । त्यसपछि भगवान गणेशको जीउमा हात्तीको टाउँको जोडियो । तसर्थ हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार उत्तर दिशातर्फ उत्तर शिरान गरेर सुत्नु नहुने मान्यता रहेको छ ।
← नारीलाई भुतुक्कै पार्ने पुरुषमा हुनुपर्ने ११ गुणहरु
उत्तर सिरानी गरेर सुत्नु नहुने वैज्ञानिक कारण →
दुर्योधनले गरेका ३ गल्तीहरु
नोभेम्बर 9, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2
3 thoughts on “उत्तर सिरानी गरेर सुत्नु नहुने पौराणिक मान्यता”
Pingback:मानिसले कति सुत्नुपर्छ ? जानी राखौ